Indlela yokuBhala i-Eulogy enentsingiselo kuYihlo - Imizekelo Ye Tributes Given At Funerals
Ifoto Contests And Careers
Emva Wena U U Uring
Indlela yokuBhala i-Eulogy enentsingiselo kuYihlo
Ukubhala indumisoUtata wakho akanakukuziva edinekile ngokwasemphefumlweni, kodwa kunokuba nzima ukwazi ukuba ungaqala phi. Ukophula i-eulogy ibe ngamacandelo kunye nokujongana nesiqwenga ngasinye ngexesha kungenza ukuba kubhalwe ukuba kulawuleka ngakumbi. Khumbula ukuthatha ikhefu kwaye uzinike igumbi lokuqhubekeka neemvakalelo zakho ukuba ziyavela ngexesha lenkqubo yokubhala.
Ukubhala i-Eulogy kuYihlo
Akukho ndlela ichanekileyo okanye engalunganga yokubhala indumiso. Ngokusekwe kubuntu bukayihlo nakwabakho, kungcono uqale ukucinga malunga nethoni oyifunayo. Ngelixa abanye abantu begxila ekudaleni ithoni enzulu kunye neyobuhlungu, akukho mithetho ithi awungekhe ungeze kuyo nayiphi na into ehlekisayo okanye ebubudenge. Ukuba utata wakho wayengumntu onentliziyo ethambileyo owayethanda ukuhlekisa abanye, ngokuqinisekileyo ungongeza ngamanye amaxesha akhe oburharha. Kungaba lula ukubhala i-eulogy ebonisa eyona nto uyihlo uyiqhathanisa nokuzama ukubhala into ocinga ukuba mayibe yiyo.
Ungayibhala njani into ebalulekileyo yoTata
Ama-60 asuka entliziyweni ngokususela kwizicatshulwa zememori ezinothando
Yintoni omele uyenze xa inja yakho isifa: amanyathelo ama-7 aKhawulezileyo wokuthatha
Isingeniso kwi-eulogy iya kuseta ithoni kwintetho yakho. Kwimigca yokuvula, unokufuna ukuzazisa, ubudlelwane bakho nomntu ongasekhoyo, kwaye ubulele abantu abambalwa. Ungaqwalasela ukuthi:
Molweni nonke, ndingu (ngenisa igama). Ndingu (faka igama likatata) umntwana. Ndifuna ukuqala ngokubulela kuni nonke ngokuza kuphuma namhlanje ukuya kubhiyozela ubomi obuhle bukabawo.
Molo, ndingu (faka igama likatata) (faka umntwana, unyana okanye intombi). Ndifuna ukunibulela nonke ngokuza kwanamhlanje ukuzohlonipha utata wam. Ndiyazi ukuba abanye benu bahambe umgama omde kakhulu ukuza kunika imbeko kwaye ndiyazi ukuba utata wam angathanda ukunibona nonke nikunye.
Molweni nonke. Ndingu (faka igama). Ndingu (faka igama likatata) (faka umntwana, unyana, okanye intombi). Nangona olu suku luza kuba lusuku olunzima kakhulu, ndifuna ukuthatha eli xesha ukukhumbula kunye nokuhlonipha iinkumbulo ezikhethekileyo ebendinazo notata wam.
Ukongeza kwiNkcukacha ezithe xaxe ngoTata wakho
Emva kwentshayelelo yakho, ungaya kwiinkcukacha malunga notata wakho. Chaza ubuntu bakhe, naziphi na izinto ezithandwayo, izinto azithandayo, angazithandiyo, kunye nayo nayiphi na into eyinyani ebonisa iimpawu zakhe zokwenyani. Unokuthi:
Utata wam wayehlala engumntu ohlekisayo. Wayekuthanda ukudlala iziqhulo ezisebenzayo kubantakwabo abakhulayo. Eli siko lidlalile njengokuba nam ndandikhula. Wayekuthanda ukuza nezi zinto zibubudenge, okanye iziqhulo ezihlekisayo ezazisoloko zisenza sonke sihleke.
Utata wam wayengumntu ongaqhelekanga. Wayengenguye kuphela oyena mntu ungumzekelo obalaseleyo, kodwa wazivolontiya ngexesha lakhe lasimahla. Uyabona utata wam wayengalunganga ngokuba ngutata omangalisayo kuphela, kodwa wayefuna nokubuyisela emhlabeni kwaye ancede abanye abasweleyo.
Eyona nto ibalulekileyo kutata wam kukuphakama kwakhe. Wayengaphezulu kweenyawo ezintandathu ubude. Ungacinga ukuba ubukho bakhe obuninzi buya koyikisa, kodwa wayengoyena mntu ulunge kakhulu kwaye ethambile endakha ndamazi.
Ii-anecdotes ezimfutshane zinokuba nentsingiselo yokuthetha ngazo. Zikukhumbuza nabanye ngamaxesha abalulekileyo katata wakho, okanye amava alula afingqa ubuntu bakhe obukhethekileyo. Kungaziva kunzima ukuthetha ngeememori ezithile zomhla, ke thatha ixesha lakho kwaye wazi ukuba kulungile ukumisa, ukuba nomnye umntu athethe, okanye uphelise intetho yakho kwangoko ukuba oku kuninzi. Ungacinga ngokwabelana:
Izinkumbulo endizithandayo zobuntwana: Enye yeenkumbulo zam endizithandayo zobuntwana zenzeka xa ...
Amaxesha ahlekisayo ekwabelwana ngawo phakathi kwenu nobabini: Ibali elishwankathela utata wam kwenzeka xa yena ....
Amasiko amnandi: Mna notata bendinalo eli siko liyimfihlo apho sasiza ....
Iinkumbulo apho utata wakho akufundise into ebambelele kuwe: Esinye sezifundo ezibaluleke kakhulu endisifundileyo kutata wam ...
Ukuvala i-eulogy, ungayigcina ilula. Ungabhala into ngokwakho, okanye ukongeza kwifayile ye-umbongo owuthandayookanye isicatshulwa sikatata wakho. Gcina ukhumbule ukuba wena nabanye ninokuziva nicaphuke kakhulu okanye ninovelwano ngeli xesha. Unokuthi:
Ndiyazixabisa iinkumbulo endinazo notata kwaye ndiyazi ukuba uyancuma sonke. Enkosi kwakhona ngokuphuma namhlanje ukuza kubhiyozela inkumbulo kabawo omangalisayo.
Ndiziva ndinombulelo kuba ndibe nexesha elininzi notata wam. Ndimkhumbula kakhulu kwaye ndiyakuhlala ndikhumbula ukuba notata ongakholelekiyo.
Andazi ukuba iza kundithatha ixesha elingakananiukuba buhlungule lahleko ingathethekiyo. Utata wayengoyena mntu ubalulekileyo ebomini bam kwaye ndiziva ndinentliziyo ebuhlungu yokungabi naye apha nathi. Imemori yakhe iya kuqhubeka ngonaphakade.
Indlela yokujongana nokuziva uxakekile
Ukuba nangaliphi na ixesha uqala ukuziva ukhathazekile okanye ukhathazeke kakhulu ukuba ungabhala indumiso, unga:
Fikelela kwinkxaso kwaye ubize umhlobo omthembileyo okanye ilungu losapho
Thatha uhambo kwaye ujonge ukuphefumla kwakho kunye nendawo ekungqongileyo
Ijenali malunga neemvakalelo zakho
Chitha ixesha kunye nezilwanyana zasekhaya okanye isilwanyana somhlobo wakho
Vumela ukuba uzive kwaye ube nobubele kuwe ngeli xesha linzima
Ziqheliseukuphumla kwezihlunu okuqhubekayo
Isampulu yeNtetho yokuBonga ngoTata
Ukuba uziva unamathele, unakocofa, hlela, kwaye uprinteezinye iintetho zesampula zokukunceda uqalise.
I-Eulogy kaTata owayenguMlobi
Le sampuli yokubonga isebenza kakuhle nakowuphi na utata owalwa ngokugula ngamandla kunye nesidima.
I-Eulogy kaTata othethileyo othethileyo
Utata owayephila ubomi bakhe ngendlela egciniweyo, kodwa enobumnene, le sampuli yokubonga inokuba yitemplate elungileyo onokuyisebenzisa.
Ukubhala i-Eulogy entle kaTata wakho
Thatha ixesha lakho kwaye ube nobubele kuwe njengoko ubhala umbulelo katata wakho. Lo inokuba ngumsebenzi omceli mngeni onzima ukuba uqhubeke nawo, ngakumbi ngexesha leemvakalelo eziphakamileyo kunye noxinzelelo. Yenza konke okusemandleni akho kwaye uyazi ukuba nantoni na oyibhalayo iya kuba ngumrhumo ofanelekileyo kutata wakho.
Inja Ukuzilungisa Plus Size Formal Clothing Baby Clothes Umtshato Wokuziphatha Ingqokelela Yeresiphi
Ukubala njani ukutya kwePati
Ngaba ndenze ngokwaneleyo ukuba ndifaka iRhafu?
Ibrashi yamazinyo kaGqr
Amaphepha angama-35 awodwa oMbala weDinosaur ayakuyithanda umntwana wakho
Apho ungathenga khona iiNdebe zeJintile zeJintp
zingaphi iimayile eziqhutywa ngonyaka
imimoya yabathandekayo endlwini
isampulu yamanqaku enkosi kwabo usebenza nabo
liyintoni ixabiso lenyathi
imisebenzi yokuthengisa yabaneminyaka eli-16 ubudala
indlela yokufumana iibhili ezimbini zeedola